Sehatry ny fambolena: manana ny toerany ny Malto | NewsMada
Sehatry ny fambolena: manana ny toerany ny Malto
Sampana iray ao amin’ny Star ny Matlo. Orinasa manana ny toerany eo amin’ny fampiroboroboana ny toekarena mifototra amin’ny fambolena any amin’ny faritra ambanivohitra izy ity. Fanindroany izao ny mandray anjara amin’ny hetsika iraisam-pirenena mikasika ny fambolena, tontosaina nanomboka omaly hatramin’ny alahady izao, eny amin’ny Forello Tanjombato, izy ireo.
Fotoana iray hampahafantaran’ny Star ny tantarany sy izay nolalovany nandritra izay 65 taona namokarany ny vita malagasy izay io. Manana toerana ho an’ireo vokatra Star amin’ny ankapobeny, andaniny, ary ho an’ny orinasa Malto manokana, ny ankilany.Tazana eny an-toerana mandritra ireo efatra andro ireo ny teknisianina sy ny solontenan’ireo mpamboly, hamaly ny fanontanian’izay liana.
Hisy hatrany ny “blind test”, karazana fitsapana ireo mpanjifa amin’ny fahalalany ny vokatra Star, eny an-toerana. Fanakaikezana ny mpanjifa rahateo ny tanjona amin’ny fandraisna anjara amin’ny hetsika toy izao.